Ukwahlukanisa imifino nezithelo - isikimu kanye nezici
Ukudla kanye iziphuzo, Yiqiniso main
Imifino nezithelo - zibe umthombo obaluleke kakhulu kwezakhi, amaminerali, amavithamini kanye fibre. Wona, kanye nawo okusanhlamvu, okusanhlamvu futhi eminye imikhiqizo amaprotheni, kufanele yisisekelo ukudla kwethu. Ngokuphambene nalokho okukholelwa yiningi, ukudla elinabantu ngokuyinhloko izithelo nemifino, kungaba ngezindlela ezihlukahlukene (kodwa hhayi ngokugcwele!). Iqembu ngalinye ngabanye libhekene izakhiwo ezithile, ukubunjwa, ukunambitheka, futhi sici elikhulayo ukusetshenziswa. Ukwahlukanisa izithelo nemifino, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko sizokubonisa ukuhlukahluka mikhiqizo kanye ukugqamisa izici zabo izinto eziphawuleka kakhulu.
Uyini izithelo nemifino?
Ngaphambi esibhekana ngayo la maqembu ngezigaba, kudingeka uqonde kahle ukuthi lisengozini. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi akukho eziyinkimbinkimbi. Imifino ukhule ensimini futhi esetshenziswa ukulungiselela eyisisekelo (elungisiwe) ukudla. Izithelo - kuba kunalokho dessert, ubumnandi, futhi zikhula phezu kwesihlahla (ezahlukene ngakho abizwa ngokuthi "izithelo"). Ngempela, okungafani main siye kuboniswe. Kodwa kunokuningi okungakhulunywanga ngakho.
Ngakho, pepper ezikhulayo kusukela esibelethweni imbali. Kodwa lokhu kuwuphawu olucacile of okuqondene izithelo. definition Scientific akunakubangelwa kubo, kanye ukhukhamba, ngisho ubhontshisi oluhlaza! Imifino njengoba endulo ngokuthi izingxenye amnandi izitshalo herbaceous. Ukuze ugweme ukudideka, sizokwenza ukuhlukanisa phakathi ngeengaba ezimbili - yezesayensi nasezinzuzweni Culinary. Ngakho, uma ngezigaba ezihlongozwayo izithelo nemifino ngeke washintsha esuka imibono yakho evamile, ungamangali. Vele uyibuke ngeso wezitshalo, hhayi umpheki.
Ake uqale nge yokuthi imifino (futhi izithelo) kukhona iqembu "isivuno ocebile" kuka futhi ihluke okusanhlamvu, ubhontshisi kanye neminye imikhiqizo isitshalo. Naphezu ukugcwaliswa yabo umswakama (kufika ku 80-90% noma ngaphezulu), imifino abacebile izakhi ezibalulekile. A ezihlukahlukene enkulu izakhi (carbon, i-nitrogen, nosawoti wamaminerali nokunye.) Futhi alulaze ukwenza mikhiqizo digestible ngu umzimba womuntu. Lokhu kubaluleke kakhulu uma kuziwa umsoco enengqondo futhi ezinhle.
Kuthiwa imibhalo eminingi ye izimpawu kwenza kube nokwenzeka ukuba uhlukanise yonke imifino, kwaba ngamaqembu amabili amakhulu: vegetative futhi okuzala. Ngo wesibili e ukudla washisa izithelo (inflorescences), ekuqaleni - vegetative izitho. Cabanga onjani Ukwahlukaniswa imifino. Ithebula elingezansi kuyosisiza kulokhu.
Vegetative nemifino okuzala
iqembu vegetative imifino Amagama imifino
nezilimo eziyizigaxa Potato, ubhatata, iJerusalema i-artichoke
izimpande Izaqathe, radishes, turnips, beet, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nokunye.
ishidi Allium (anyanisi)
Iklabishi (ngaphandle broccoli, cauliflower ne kohlrabi)
Ulethisi, isipinashi (lezi iziphiwo zomusa ezahlukeneyo ulethisi, isipinashi)
Spicy (coriander, Tarragon, dill)
stem Asparagus, kohlrabi
Okuzala umculi imifino Amagama imifino
imbali Broccoli, cauliflower
isithelo Cucurbits (ithanga, zucchini, ikhukhamba, ibhece kanye ikhabe)
Utamatisi (utamatisi, pepper, eggplant)
Okusanhlamvu (ubhontshisi, uphizi, ubhontshisi kanye nemifino)
Ukusebenzisa le ngezigaba, uyokwazi ukwakha ukudla yabo kuncike izici iqembu ngalinye kanye nezidingo emzimbeni wakho kwezakhi ezithile. Ngaphezu kwalokho, abanye imifino zingcono futhi kulula ukugaya, kuyilapho ezinye zidinga amandla le njongo.
amaqembu Calorie ezahlukene imifino
Njengoba wazi, kubhekwe Ukwahlukaniswa imifino kubenza bakwazi ukwabelana hhayi kuphela kuye ukuthi iyiphi ingxenye umkhiqizo isetshenziswa ukudla. Phakathi kokungafani okukhulu kakhulu, futhi izinkomba ezifana ukubaluleka amandla esivela eqenjini elithile.
Kungani, isibonelo, amazambane belulekwa ukuba adle ngokulinganisela? Lokhu olubangelwa okusezingeni eliphezulu ikhalori tuber, yena naye ungowasendaweni. It ifinyelela 70-80 kcal 100 grams ngasinye. Futhi sisebenzisa ingxenye, ngokuvamile ngaphezulu (200-300 amagremu). Futhi uma silungiselela kahle ithandiwe amazambane athosiwe noma okuthosiwe, akukuhle ukuqala ekubaleni!
Baqede aphansi in kilojoule - mayelana 20-50 kilojoule amagremu 100 imifino. Esikhathini onion, lesi sibalo siyahluka kakhulu. Ngakho, okuqukethwe kwama-kilojoule of amaliki 36 kcal, kuyilapho ugarliki ifinyelela kakhulu ngendlela 149 kcal! Kodwa akufanele ukuwakhipha kusuka Ukudla yalezi imifino ewusizo, ngaphezu kwalokho, ngesikhathi ukudla amagremu 100 garlic kudingeka namanje uzame.
Izinguqulo eziningi kunazo futhi isici ezingengaphansi wusizo iqembu izithelo nemifino. Ngesikhathi ikhalori okuqukethwe efanayo zabo liphansi kakhulu - ngokwesilinganiso ke zokhahlamba kusuka 15 kuya 35 kcal. Ngakho-ke, imifino isaladi (utamatisi, ukhukhamba, pepper, njll) belulekwa ukuba afake ekudleni kwakho kazhdodnevyny (kungaba izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngosuku).
Ukwazi ikhalori okuqukethwe silinganisiwe iqembu imifino ngamunye, kulula ukunquma ukuthi yiziphi wabo ukudla kaningi futhi izinto eziningi ezinkulu futhi lokho okudingekayo ukuze uqaphele. Ngesikhathi esifanayo ukuba bangayeki ezinye umkhiqizo (amazambane efanayo) ngenxa okusezingeni eliphezulu amandla yenani akulona kunomvuzo, ngoba, ngaphezu kilojoule kuwo amaningi izakhi kanye amavithamini. Beka umkhawulo, kodwa ngaphandle.
Enye ngezigaba uhlelo imifino
Ngaphezu kwalokho rassmtotrennoy kithi, kunesinye ngezigaba, owawuthi imifino zingahlukaniswa zibe okunesitashi futhi okungezona okunesitashi kanye oluhlaza. Lo mqeqeshi owake wapheka zihlanganisa :. izaqathi, beet, Ugalonci, zucchini, cauliflower, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi impande kanye parsley, njll With ukusetshenziswa kwalezi imifino ukudla kufanele sihlanganise nabo neminye imikhiqizo. Ngakho, ngo-inkampani ushukela bekunikeza inqubo ezingemnandi ezinjalo, ukuvutshelwa.
Ukuze oluhlaza futhi okungezona okunesitashi zihlanganisa zonke izinhlobo amakhambi (parsley, dill, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ulethisi nokunye.), Isitshalo seqanda, bell pepper, ukhukhamba, u-garlic, anyanisi, uphizi oluhlaza. Leli qembu imifino ugxile ngempela kalula umzimba futhi kuhlangene cishe kwayo yonke imikhiqizo - kusuka amaprotheni isilwane ukuze imidumba nokusanhlamvu.
Iqembu Lesisemkhatsini - okuthiwa srednekrahmalistye imifino. Kuhlanganisa turnips, radishes, turnips, kanye nabanye. On the ukuhambisana yalezi imifino eduze green kunezimfundiso okunesitashi. Uma ugxile induduzo esiswini kanye ukugaya okuhle, sincoma ukuthi uhlolisisa ngamunye la maqembu lethu.
Inchazelo elula izithelo kuyinto: kungcono ezidliwayo namanzi izithelo kwezihlahla notshani (ezisusela olimini lwesiLatin fructus - izithelo.). Ngaphezu kwalokho, umbono wethu ezimfushane Kuthi ezahlukene kusukela Botanical, okuyinto empeleni ebanzi. Uma Ukwahlukaniswa imifino kuhlanganisiwe imifino kuphela (ngomqondo evamile), lapha sizocabangela zonke izithelo. Ngakho, babiza kanye amajikijolo, namantongomane, okuyinto zihlukaniswa ukujula yabo futhi zisiza ezihlahleni kanye sezihlahla. Ithebula elingezansi kuyosisiza ukwabelana izithelo kuwo wonke amaqembu.
Ukwahlukaniswa kwamadamu izithelo
iqembu Amagama izithelo
pome Kunamagonandoda, apula, Quince
itshe Peaches, plums, cherry, amabhilikosi
amajikijolo Strawberry, ama-raspberry, gooseberries, currants, amagilebhisi, amajikijolo, njll ..
nuciferous UHazel, hazelnuts, walnuts, ama-alimondi, uphayini, amantongomane, pistachios, nabanye.
Nakwezifudumele futhi ezishisayo (e iqembu ehlukile ngenxa izimfuneko kwezimo ezithile zezulu kulinywe yabo) Ulamula, amawolintshi kanye nezinye izithelo ezisawolintshi, namahalananda, Persimmons, ubhanana, amakhiwane, izinsuku nokunye.
Ukwahlukanisa izithelo nemifino kusisiza ukuba sibone ahlukahlukene kanjani kulesi sigaba ukudla. Ngalinye neqembu izithelo has izici zayo siqu. Ngakho, ngokwesibonelo, nut kilojoule amaningi. amandla abo value kungaba ama-kilojoule angu-600 nokuningi! Ngakho-ke kubalulekile ukuba kube nomkhawulo ekudleni kwabo. Ngaphezu kwalokho, nati - umkhiqizo esindayo kakhulu emzimbeni wethu.
Akubona bonke izithelo amnandi
Enye ngezigaba lalivamile lubahlukanise ku izithelo ezinoshukela, semi amnandi futhi omuncu. Kugcine kabanzi emelelwa kakhulu ezweni lethu. Ngokuthi esidi ezisawolintshi izithelo, namahalananda, cranberry, uphayinaphu, kanye ezinye izinhlobo apula, plums, amagonandoda, amagilebhisi. Semi-acid - a sitrobheli, okusajingijolo, waba mnandi cherry, apula, plums, amagonandoda. Sweet njengoba banana, ikhabe, ikhabe (namanye izithelo) kufanele igcine ku ekudleni futhi, uma kunokwenzeka, kanye lutho ukufanisa.
Sebentisa lwati ekhishini
Uma wazi Ukwahlukaniswa nezithelo nemifino eminingi, ungakwazi kalula ukwakha odla ngayo ngokuvumelana nezimiso umsoco ofanele. Kufanele I nidle lokhu okufakiwe isaladi noma kangcono ukuze kukhawulwe ingxenye encane? Khonza amazambane ekutheni side dish ukuze inyama noma ubhontshisi?
Ezindabeni ezinjalo, ungakwazi kalula ukukhokhela ukuphendula. Uma ufunda ulwazi sabelane esihlokweni, bese ngokushesha uzoba ngumnikazi Ukwahlukaniswa izitsha ezivela imifino nezithelo. Ezinye iyoba isisekelo ekudleni, abanye izovela ke nenani kancane futhi mensheh. Sithemba ulwazi lube usizo kuwe futhi impilo yakho.
Pizza enkulu kunazo zonke emhlabeni: kangakanani-ke esilinganisa futhi senziwa lapho?
Ilayisi uwoyela: izakhiwo ewusizo, Izimo, zokupheka, umsoco kanye nokubuyekeza
Ushizi nezinyosi appetizers engavamile zokupheka
Star anise - ukuthi kuyini nokuthi ukulisebenzisa ukupheka?
Ikhukhamba: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka yendlela elisetshenziswa ngayo ukudla
Impilo eshalofini ushizi ezahlukene nezinhlobonhlobo nezici isitoreji
Top 10 ethandwa ukuphila nokugenca, engasebenzi
Tax Audit: izinhlobo, izici
Garden Amathuluzi: Key
Ziyini izingqikithi? Inani legama elingasebenzi
Kuyini yokwesaba, nendlela yokubhekana naso?
Indlela ekhiphela up nabezindaba enyangeni edlule
Dream Ukuhunyushwa: kwabathinta lokho kuyiphupho nje?
ATVs Wadala, okuzenzela
Imyuziyamu ku-VDNKh: izinkolelo, ama-dinosaurs, izithombe, i-cosmonautics
Yini nendlela ukuhlanza crystal ekhaya?